baby food – Healthy Life Journal
All posts tagged "baby food"
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကလေးတွေကို အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အချိုရည်၊ Instant ဖော်မြူလာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အဆင်သင့်အစာ (Junk Food) တွေကို ကျွေးလာကြတာကို တွေ့ရတာကြောင့် ဒါတွေက ကလေးအသက် ၅...
ဖြည့်စွက်စာနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှု ရှိ၊ မရှိ
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးတစ်ယောက်ကို ဖြည့်စွက်စာစကျွေးချိန်မှာ ကလေးက အဲဒီအစာနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိုင်ပါသလဲရှင့်။ A. အစာအသစ်တစ်မျိုးကျွေးတိုင်း သုံးရက်စောင့်ကြည့်ရပါတယ်။ ဒါက သဘာဝပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြည့်စွက်စာမှာ...
ကလေးခြောက်လပြည့်လို့ ဖြည့်စွက်စာကျွေးမယ်ဆိုရင် . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးခြောက်လပြည့်လို့ ဖြည့်စွက်စာကျွေးရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွေးလို့ရသလဲ။ A. ခြောက်လပြည့်ရင် ဖြည့်စွက်စာကျွေးလို့ ရပါပြီ။ ထမင်းကို ကျိုပြီးရင် Blender နဲ့ ကြိတ်ရပါမယ်။ ကြိတ်ပြီးရင် တစ်ခေါက်ပြန်ကျိုပြီးမှ ကျွေးရပါမယ်။
ကလေးတစ်ဦးကြီးထွားခြင်းအတွက် အရေးပါသည့် ပုံစံလေးမျိုး
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– ကလေးက မွေးလာပြီဆိုရင် ပုံစံလေးမျိုးနဲ့ ကြီးထွားပါတယ်။ (၁) Physical Growth ဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပန်း အစိတ်အပိုင်းဖွံ့ဖြိုးပြီး အရပ်လည်း ရှည်လာရပါမယ်။ (၂) Cognitive Development ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာရမယ်။...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကလေးတွေကို အသက်ခြောက်လအရွယ်အထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကလေးငယ်ရဲ့အသက်ခြောက်လ ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ ကလေးငယ်ကို ဖြည့်စွက်စာကျွေးဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ခြောက်လအထက် ကလေးတွေကို ဖြည့်စွက်စာကျွေးရတာရော၊ ဒီ့ထက် အသက်ပိုကြီးလာတဲ့ ကလေးတွေကို...
သင့်ကလေး စားသင့်သည့် အိပ်ရာဝင်ချိန် သရေစာများ
(၁) နွားနို့ပူပူတစ်ခွက် (သကြားမပါ) (၂) ငှက်ပျောသီးထည့်ထားတဲ့ ကွေကာ (၃) ပန်းသီးစိတ် (၄) ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ခရက်ကာမုန့်၊ ချိစ် (၅) မြေပဲထောပတ်နဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး (၆) ထောပတ်သီး၊ ပဲ (၇) ဒိန်ခဲ ဒါမှမဟုတ်...